Cloud Computing: အားနည်းချက်များဒင်္ဂါး၏အခြားတစ်ဖက်! | Linux မှ
Cloud Computing: အားနည်းချက်များ - ဒင်္ဂါး၏အခြားတစ်ဖက်!
Linux Post Install လုပ်ပါ | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ, အတော်ကြာ
ခေါ်အကြောင်းအရာအပေါ်ယခင်ဆောင်းပါး၌တည်၏ «XaaS: Cloud Computing - ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်« Cloud Computing ၏အကျိုးကျေးဇူးများ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အားသာချက်များနှင့်အခြားလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်ဤအချက်သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေလက်ရှိနည်းပညာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကမ္ဘာအတွက်ရှေ့ဆက်လမ်းဖြစ်ပုံရသည်။
သို့သော်သူတို့သည်ထိမိခြင်းသို့မဟုတ်နက်ရှိုင်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်နည်းပညာ၏ဆိုးကျိုးသို့မဟုတ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့် GNU / Linux တို့၏အတွေးအခေါ်အရ၎င်းထံချဉ်းကပ်မှုနည်းသည်။ ဒါကြောင့်ဒီ post မှာပြောထားတာကနည်းပညာနဲ့ပါတ်သက်တဲ့မျှတတဲ့ဟန်ချက်ညီအောင်ဒီရှုထောင့်တွေကိုဖြေရှင်းပါမယ်။
Cloud computing ကိုအခြေခံသော application များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်သုံးစွဲသူများသည်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုရရှိနိုင်မှုနှင့်ရရှိရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်နှင့်၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးပေးသူများသည်နည်းပညာနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအန္တရာယ်များနှင့်ရှုံးနိမ့်မှုများကိုမိုon်းတိမ်ပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းကြောင့်သင့်လျော်ပြီးလိုအပ်သောလုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအလေ့အကျင့်များနှင့်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။
ခိုင်မာသော၊ ခိုင်လုံသော၊ မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအပေါ်သူတို့၏စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံနိုင်ရန်၎င်းတို့သည်ဤအာမခံချက်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤနည်းပညာ၏အဓိကကစားသမားများဖြစ်သောပံ့ပိုးသူများသည်စာရင်းစစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုမှုများကိုအမြဲတစေထိုးနှက်ခံနေရသည်။
သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာများကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆုံးရှုံးမှုများ၊ အန္တရာယ်များသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်မှုများအပြင်၎င်းသည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုအတွေးအခေါ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်မှာအမှန်ပင် လူအများကသူတို့၏တစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်စုပေါင်းလွတ်လပ်မှုသို့မဟုတ်လွတ်လပ်မှုအဖြစ်တန်ဖိုးထားခြင်းသို့မဟုတ်မြင်ယောင်ခြင်းများကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သည်။
1.1.3 insulator တွင်လည်းအမှား
1.1.5 စီမံခန့်ခွဲမှု interface ကိုအပေးအယူ
1.2.1 အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအခမဲ့ software ကို
1.2.2 Cloud Computing နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအခမဲ့ဆော့ဝဲ
ကွဲပြားခြားနားသောစျေးသည်များကကမ်းလှမ်းသောသီးခြားလုံခြုံရေးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူ cloud computing ၏လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကိုထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချသည်။ Cloud computing သည်လုံခြုံရေးနှင့်တိုးတက်မှုများမအောင်မြင်ခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သို့သော် cloud computing တွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သောလုံခြုံရေးအတွက်အဓိကအန္တရာယ်များမှာ -
Cloud အခြေခံအဆောက်အအုံများထိခိုက်နိုင်ပါသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူသည် Cloud ရှိတူညီသောပံ့ပိုးသူများ၏လုံခြုံရေးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သောအချို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာအရာများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုစွန့်လွှတ်သောအခါ။ သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများက ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများမှလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကာကွယ်မှုကိုမဖုံးကွယ်ထားလျှင်၎င်းသည်လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ "ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း" ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
သုံးစွဲသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် cloud provider နှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေပြီးနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာသဘောတူစာချုပ်များရရှိထားပြီးပါကကိရိယာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စံသတ်မှတ်ထားသောဒေတာပုံစံများ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုမျက်နှာပြင်များသည် ၀ န်ဆောင်မှု၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့်အချက်အလက်များ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအာမခံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး မှတစ်ခုသို့အခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အချက်အလက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးမဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်သည်။
သိုလှောင်ခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်၊ လမ်းကြောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ခွဲခြားသောယန္တရားများအားပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်ခြင်း ရှုပ်ထွေးမှုအဆင့်ရှိသောကြောင့်ပံ့ပိုးသူ (H ည့်သည်ခုံရုံးတိုက်ခိုက်ခြင်း) ၏အယောင်ဆောင်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အလွန်မကြာခဏမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်အခက်အခဲသူတို့ကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဤနည်းပညာသည်မည်မျှစျေးကြီး။ ခေတ်မီခြင်းကြောင့်အကြိမ်များစွာ တူညီသောပံ့ပိုးသူများသည်ကဏ္ of ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုအပ်ချက်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားလေ့ရှိသည်ရေရှည်တွင်အင်တာနက်ပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်လည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။ အခွားသောအမှုများမှာ cloud တွင်အသုံးပြုသောအခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးပြုမှုသည်သုံးစွဲသူများနှင့်ဖောက်သည်များအားကတိထားသည့်အတိုင်းအတာအချို့သို့မရောက်ရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
စီမံခန့်ခွဲမှု interface ကိုအပေးအယူ
Cloud ပံ့ပိုးသူ၏ client စီမံခန့်ခွဲမှုမျက်နှာပြင်များကိုများသောအားဖြင့်အင်တာနက်မှတဆင့်ရယူနိုင်သည်အဘယ်အရာကိုရှိုးနိုင်ပါတယ် ပိုမိုမြင့်မားသောလုံခြုံရေးအန္တရာယ်အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသောဝဘ်ဘရောက်ဇာများ၏အားနည်းချက်များအပြင်အထူးသဖြင့်ဝေးလံခေါင်သီသောနည်းပညာများ၊ မူဝါဒများနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ။
တခါတလေ Cloud Computing ပံ့ပိုးသူ၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်ဝယ်ယူသူသည်မှန်ကန်သောသို့မဟုတ်အအောင်မြင်ဆုံးအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်ကိုအသုံးချသည်သို့မဟုတ်ထိရောက်စွာစီရင်သည်ကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးရန်၎င်းသည်အတော်အတန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဒေတာများကိုဥပဒေနှင့်အညီစီမံခန့်ခွဲကြောင်းသေချာရန်သင့်အတွက်ခက်ခဲသည်။ နှင့်ဤကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ။ , သူတို့မကြာခဏသူတို့ရဲ့ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့လုံခြုံရေးနယ်ပယ်နှင့်သူတို့၏ခံယူဒေတာထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အသိအမှတ်ပြုအကျဉ်းချုပ်အပေါ်ရိုးရှင်းသောအစီရင်ခံစာများအဘို့အအခြေချရန်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် (Data Protection) နှင့်ဆင်တူသည့်နောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုမှာкачанဖြစ်သည် Cloud Computing ပံ့ပိုးသူ၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်သုံးစွဲသူသည်၎င်းကိုအလားတူထိရောက်စွာအတည်ပြုရန်အစစ်အမှန်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စံဖြစ်စဉ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြတ်သားစွာဒေတာကိုဖယ်ရှားပစ်ကြဘူးကတည်းက, လုံးဝမဆိုတောင်းဆိုထားသောဒေတာဖယ်ရှားပစ်။ ထို့ကြောင့်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်ပံ့ပိုးသူများ၏ရှုထောင့်မှမည်သည့်ဒေတာကိုမဆိုသို့မဟုတ်လုံးဝပယ်ဖျက်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်သို့မဟုတ်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်ရှိသောအဖွဲ့ ၀ င်များမှပျက်စီးခြင်းသည်ရှားပါးသည်။ သို့သော်မကြာခဏဖြစ်ပွားသောအခါ၎င်းသည်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေသည်။
ဤအချက်ကိုထောက်ပြရန် Richard Stallman မှအောက်ပါကိုးကားချက်ကိုကိုးကားသင့်သည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲသည်သင်၏လွတ်လပ်မှုကိုဆုံးရှုံးရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ဆော့ဗ်ဝဲအစားထိုးဝန်ဆောင်မှု (SaaSS ဖြစ်သည်), ဆိုလိုသည်မှာ "ဒုစရိုက်ကိုပြုလော့ "ဆော့ဗ်ဝဲအစားထိုး" ဆိုသည်မှာသင်၏ကွန်ပျူတာအားအာဏာကိုဖယ်ရှားပေးသည့်နောက်တစ်နည်းဖြစ်သည်။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအခမဲ့ software ကို
ငါတို့တခြားအချိန်တွေမှာတွေ့ခဲ့ရသလိုပဲ ကမ္ဘာ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစတင်ချိန် မှစ၍ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲလ် (SL / CA) သည်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပိတ်ထားသောရင်းမြစ်ဆော့ (ဖ်) နှင့်အတူပူးတွဲတည်ရှိသည်။။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများနှင့်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုကိုခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုရှေ့တန်းမှအမြဲတမ်းရှေ့တန်းတင်ထားသည်။
ဤခြိမ်းခြောက်မှုသည်အန္တရာယ်ရှိသောအင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်သူ့ဟာသူပေါ်လာတတ်သည်စပိုင်ဝဲများ၊ နောက်ကျောတံခါးများနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှု (DRM) စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုဖော်ပြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်မှုနှင့်လွတ်လပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ထို့ကြောင့် SL / CA ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုသည် SP / CC ကိုတန်ပြန်ရန်အလားအလာရှိသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏ (၄) အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်လေးခုကြောင့်လူသိများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလုပ်ဆောင်မှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းအာမခံသောလွတ်လပ်ခွင့်များ။
Cloud Computing နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအခမဲ့ဆော့ဝဲ
သို့သျောလညျး 'Cloud Computing' မော်ဒယ်သစ်ပေါ်ထွက်လာခြင်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနည်းလမ်းသစ်ဖြစ်သည် အားလုံး (အသုံးပြုသူများ၊ ဖောက်သည်များ၊ နိုင်ငံသားနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်မှုနှင့်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်၊ တူညီသောမလိုလားအပ်သော Cloud Computing (သို့မဟုတ် Cloud Services / SaaS) နှင့် Proprietary Software များ။
၎င်းတို့သည်အလားတူအန္တရာယ်ရှိသောရလဒ်များကို ဦး တည်သည်။ စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်အတူသင်ယန္တရားသည်သင်ပိုင်ဆိုင်သည်နှင့်ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲပြီး / သို့မဟုတ်တရားမဝင်သောမိတ္တူတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ SaaS နှင့်အတူယန္တရားမှာသင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းများကိုသင်လုပ်ဆောင်နေသည့်မိတ္တူမရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအချက်သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောကြောင့်ဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည် ရစ်ချတ် Stallman နေဖြင့်အပြည့်အဝဆောင်းပါး ပလ္လင်။
အထက်ဖော်ပြပါစွန့်စားရမှုအားလုံးသည်တိကျသောဝေဖန်မှုအစဉ်လိုက်ကိုသေချာပေါက်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါယင်းအစား၊ သူတို့သည် cloud computing နယ်ပယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်လက်ရှိအန္တရာယ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Cloud Computing အသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ဒေသတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံမော်ဒယ်များဖြစ်သောရိုးရာဖြေရှင်းနည်းများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းမှရရှိသောစွန့်စားမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရမည်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး၊ စက်မှုဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အဆင့်တွင်အားသာချက်များမှာများပြားသော်လည်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ရိုးရှင်းသောစွန့်စားမှုများသည်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်တရား ၀ င်အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၎င်း၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နေထိုင်မှုမဟုတ်ပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်သိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုအထူးသဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း၊ အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ လှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့သောအသေးစားအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Cloud Computing: အားနည်းချက်များ - ဒင်္ဂါး၏အခြားတစ်ဖက်!
Beatriz Aurora Pinzón ဟုသူကပြောသည်
Beatriz Aurora Pinzónအားပြန်ပြောပါ
Microsoft Windows ကိုအသုံးမပြုရန်အကြောင်းပြချက်
Apache Software Foundation မှ GitHub Integration ကိုကြေငြာခဲ့သည်